Fetsy hanamboarana ny charger an'ny laptop, netbook na ultrabook - Ikkaro
firosoana >> fanamboarana >> Ahoana ny fanamboarana charger laptop
Okay…. tsy fanamboarana ankapobeny, fa toy amboary ny lesoka mahazatra indrindra amin'ny charger laptop, izay ny fantsom-pifandraisana dia mivoaka avy amin'ny lovia ary tsotra toy ny manokatra, manapaka ary mametaka indray. Saingy ny zavatra tena sarotra eritreretiko dia ny manokatra charger ary ity misy horonan-tsary tena tsara.
Mitovy io fa ny tena marina dia miasa tsara ilay horonantsary, hehehe
Ary fomba iray hafa toy ny any ambanivohitra ary toa azo itokisana ihany koa.
Miaraka amin'ireo mpanodina volo dia ho afaka hanimba ny plastika fotsiny ianao, manome toky anao aho, jeejej Mety ho toa hadalana io fa namonjy ahy. Ny maha samy hafa ny fividianana charger vaovao sy ny fampiasana ilay simba ;-) satria ny tena marina dia tsy dia mora loatra ny manokatra azy. Fantatrao ... ny rehetra hiadiana fahazaran-dratsy efa nomanina.
Ny enigma ratsy an'ny fanesorana ny 3
Fanehoan-kevitra 2 momba ny "Ahoana no fanamboarana charger laptop"
fivarotana charger notebook
Novambra 14, 2015 amin'ny 8:13 maraina
Lahatsoratra tena tsara! Misaotra sy arahaba
4 Janoary 2016 amin'ny 7:57 hariva